यी आवश्यक तत्वहरु संग एक सफल लोगो बनाउनुहोस् - Print Peppermint
सेप्टेम्बर 16, 2021 | ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन कि एक उत्कृष्ट लोगो डिजाइन दर्शकहरु मा त्यो पहिलो छाप बनाउन को लागी एक प्रमुख योगदानकर्ता हो।
एक लोगो तपाइँको व्यापार को मूल्यहरु लाई संचार गर्दछ, तपाइँको दृष्टिकोण बताउँछ, र यहाँ सम्म कि मानिसहरुलाई तपाइँको नाम भरोसा गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँको लोगो लक्षित ग्राहक को लागी सही सन्देश बोल्दैन, तपाइँको व्यापार महत्वपूर्ण समस्या मा छ। तपाइँ यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको ब्यापार सफलता कसरी तपाइँ तपाइँको लोगो डिजाइन मा निर्भर गर्दछ।
तेसैले, कुनै पनी एक सफल लोगो डिजाइन निर्माण गर्नु भन्दा पहिले तपाइँको पहिलो उपक्रम हुनु पर्छ। मानौं कि तपाइँ एक पेशेवर लोगो निर्माता मा पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न।
र यदि तपाइँ यो आफैं गर्न चाहानुहुन्छ, यो गाइड पढ्नुहोस्। यहाँ, हामी केहि महत्वपूर्ण तत्वहरु कि तपाइँ कुनै पनी बाधाहरु बिना एक संपन्न लोगो को निर्माण मा मद्दत गर्नेछ चर्चा गर्नेछौं। तेसैले, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र पढ्नुहोस्!
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको लोगो मा यी essential आवश्यक तत्वहरु छन्:
त्यहाँ एक लोगो डिजाइन गर्दा विचार गर्न को लागी धेरै महत्वपूर्ण कारकहरु छन्। र ती कारकहरु लाई थाहा बिना, यो एक सही डिजाइन बनाउन को लागी असम्भव छ।
हामीलाई तपाइँ एप्पलको लोगो को एक उदाहरण को व्याख्या गरौं! बस यसको लोगो मा हेर्नुहोस्: यो बलियो र सन्तुलित यो संकेत के हो कि यो प्रतिनिधित्व गरीरहेको छ। यो अद्वितीय र सदाबहार हो कि मानिसहरु लाई रमाईलो छ। यस बाहेक, यो कि आला मा धेरै ब्रान्डहरु को लागी केहि प्रमुख प्रेरणा vibes दिन्छ।
यो एउटा सानो उदाहरण थियो। तपाइँ नाइके, गुगल, बिंग, र अधिक मा हेर्न सक्नुहुन्छ। खैर, सबै सफल लोगो आवश्यक तत्वहरु को तर्फ बाट आधार समाते। र गहिरो खुदाई पछि, हामी ती तत्वहरु यहीं प्रकट गर्नेछौं। त्यसोभए, पढ्नुहोस्!
तेसैले, यहाँ पहिलो तत्व छ कि तपाइँ तपाइँको लोगो डिजाइन गर्दा विचार गर्नु पर्छ प्रवेश गर्दछ। एक लोगो सही मापन र तीखोपन संग आउँछ!
चाहे तपाइँ एक प्रतिमा, पाठ, ग्राफिक प्रतीक, वा दुबै तत्वहरु छनौट गर्दै हुनुहुन्छ। यो तपाइँको कम्पनी प्रदर्शन गर्नु पर्छ - यसको धैर्य र दर्शन - यसको मूल्यहरु।
यहाँ तपाइँ ब्रान्ड Puma जसको लोगो यसको नाम को रूप मा एकै हो र उही व्यक्तित्व को प्रतिबिम्बित को एक उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। बस त्यसै गरी, तपाइँ आफ्नो ब्रान्ड दर्शन र दिमाग मा मूल्यहरु राख्न को लागी सही सामग्री छर्कन को लागी छ।
साथै, तपाइँको दर्शकहरुलाई दिमागमा राख्नुहोस् किनकि तपाइँ तपाइँको लोगो को जरूरत छ तपाइँको चिन्ता प्रकट गर्न को लागी। तेसैले, यो प्रारम्भिक चरण मा सावधान रहनुहोस् र सबै कुरा बलियो र सन्तुलित राख्नुहोस्।
यो जान्न को लागी एक नयाँ कुरा होइन कि सादगी अरु लाई प्रभावित गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। ठिक छ, तपाइँ तपाइँको लोगो मा उही सरल सूत्र लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
सधैं दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँको लोगो फैंसी हुन आवश्यक छैन। यो यो कारणले हो कि मानिसहरु हेर्न वा बुझ्न गाह्रो चीजहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न मन पराउँदैनन्। बस यसलाई सरल राख्नुहोस् ताकि सबैले बुझ्न सक्छन् कि तपाइँको लोगो एक नजर मा के बारे मा छ।
यहाँ, तपाइँ ब्रान्ड एप्पल को एकै उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। लोगो 98%% सरल छ बुझ्न र आँखा को लागी।
केहि लोगो बिर्सन को लागी गाह्रो छ र याद गर्न को लागी यति सजिलो छ।
यसलाई फेरि पढ्नुहोस्! लोगो सम्भव भएसम्म सरल हुनु पर्छ जब कोहि डिजाइन मा देख्छ; यो सदाको लागी दिमागमा बसोबास गर्दछ। यो यादगार हुनुपर्छ।
यहाँ तपाइँ म्याकडोनाल्ड को लोगो को उदाहरण लिन सक्नुहुन्छ। हामी पक्का छौं जब तपाइँ यसको लोगो देख्नुहुन्छ, यो तपाइँलाई यसको खाना को याद दिलाउनेछ। त्यस्तै गरी, तपाइँ तपाइँको लोगो मा मानहरु लाई जोड्नु हुन्छ कि तपाइँको व्यापार सेवाहरु लाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र तपाइँको ब्रान्ड मा दर्शकहरु लाई जोड्दछ।
यो सामान्यतया एक लोगो मा धेरै दृष्टान्तहरु को माग को लागी आकर्षक छ।
यस कारण को लागी, एक लोगो सम्पादक वा लोगो निर्माता उपकरण को उपयोग महत्वपूर्ण छ। यी लोगो निर्माता उपकरण एक सटीक क्यानभास जसमा तपाइँ वेक्टर डिजाइन कोर्न सक्नुहुन्छ प्रदान गर्दछ।
साथै, तपाइँ कुनै पनी बाधाहरु बिना धेरै ढाँचाहरुमा तपाइँको डिजाइन बचत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै लोगो डिजाइन उपकरण र सफ्टवेयर छन्। तर हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाइँ सबैभन्दा राम्रो र प्रयोग गर्नुहोस् नि: शुल्क लोगो निर्माता ताकि केहि पनी तिर्नु बिना तपाइँ एक सही व्यापार लोगो डिजाइन उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
एउटा लोगो १०० मिटर टाढा वा २० मिलिमिटर टाढाको बिजनेस कार्डमा ठुलो मात्रामा बिलबोर्डमा देखिने र श्रव्य हुनु पर्छ।
यो बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, सामाजिक मिडिया, टी शर्ट डिजाइन, र अन्य मार्केटि like सामग्री जस्तै विभिन्न आकार रूपहरु मा राम्रो संग सेवा गर्नु पर्छ। यसबाहेक, एक राम्रो लोगो धेरै रंगहरु र केवल एक वा दुई टोन मा राम्रो संग जान्छ।
एक उत्कृष्ट लोगो उज्यालो वातावरण र गाढा फ्रेमवर्क मा राम्रो काम गर्दछ, पनी रंगीन पृष्ठभूमि मा। तेसैले, यो लचीलो बनाउन र सही रंग छान्नुहोस्।
प्रवृत्ति संग सार्नु एक राम्रो कुरा हो, तर नवीनता राम्रो छ। तपाइँको लोगो कालातीत र अद्वितीय हो कि कहिल्यै फीका हुँदैन। उदाहरण: कोका कोला, डायर, रोलेक्स।
एक शानदार लोगो कालातीतता को एक स्वाद हुनेछ। कहिलेकाहीँ, विचार दिमागमा पुग्न असफल हुन्छ। त्यस समयमा, तपाइँ अनलाइन को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ लोगो निर्माता उपकरणहरू।
उनीहरु अद्वितीय तत्वहरु र सुविधाहरु को एक गुच्छा प्रदान गर्दछ कि तपाइँको लोगो मा पूर्णता थप्नेछ।
तेसैले, पाठकहरु, यो कसरी तपाइँ यी तत्वहरु को उपयोग गरी एक सफल लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रक्रिया हतार नगर्नुहोस्! चरणहरु को पालना गर्नुहोस्, उदाहरणहरु लाई विचार गर्नुहोस्, र कुनै पनी बाधाहरु बिना एक सही व्यापार लोगो डिजाइन संग आउनुहोस्।
T3एक सुझाव कसरी एक लोगो बनाउन को लागी 2021 मा तपाइँको ब्रान्ड को बारे मा बोल्ने
डिजिटल भिजिटि cards कार्ड बनाउन को लागी सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग